Izici nokunakekelwa kwekati elihle lase-York Chocolate | Amakati kaNoti
Uma uwathanda amakati anoboya obumnyama futhi ungathanda ukuba nawo onengubo ende futhi entofontofo, uhlobo I-York Chocolate kungahle kube ileyo oyifunayo. Lobu boya obumaphakathi bunokubukeka okukhaliphile, ukubonakaliswa kwangempela komlingiswa wakhe.
Ungumuntu othanda uboya othanda ukufunda izinto ezintsha futhi, njengawo wonke ama-feline asekhaya, yiba isikhungo sokunakwa komuntu omthanda kakhulu.
1 Umsuka nomlando wekati lase-York Chocolate
4 Ukunakekelwa kwekati lase-York Chocolate
5 Ibiza malini ikati le-York Chocolate?
6 Izithombe Zekati Zase-York Chocolate
Umsuka nomlando wekati lase-York Chocolate
Ngawo-80 ikati eligama linguBlacky elalihlala epulazini eNew York lawela izindlela nekati elilahlekile iSmokey. Amazinyane azelwe kumele abe mahle, ikakhulukazi lawo abenoboya obuningi obunemibala kashokolethi. Lo furry omncane wadonsela ukunaka okukhulu kumuntu wakhe, kangangoba waze wamazisa endaweni ahlala kuyo.
Ngakho-ke, kancane kancane wathandwa kakhulu, ngoba ngaphezu kokuba muhle wayenothando nomusa kakhulu. Ekupheleni kweminyaka yama-80s kwase kunamakhophi ambalwa alolu hlobo, futhi eminyakeni engama-90 izinga lenziwa. Namuhla kubhekwa njengohlobo lwezinhlangano zeCFF ne-ACFA.
Ikati Lase-York Chocolate Inoboya obumaphakathi ngokomzimba, inesisindo esingu-5-6kg kwabesilisa bese kuthi kancane kube nesifazane. Umzimba uvikelwe ungqimba oluningi lwezinwele ezinde, ezinombala kashokoledi. Ingaba namachashazi amhlophe ebusweni noma emsileni.
Yisilwane esinamandla, esinesisindo esihle semisipha, futhi silinganiswe kahle. Ikhanda lakhe liphakeme ngandlela thile. Amehlo aluhlaza, ansundu noma ngegolide, nezindlebe zikhombe.
I-protagonist yethu inomlingiswa omangalisayo. Unelukuluku lokwazi, uyahlekisa futhi uhlakaniphile. Uyakujabulela kokubili ukuthatha isihlwathi futhi azihlalele edlala nalabo abasondelene kakhulu naye. Uyakuthanda futhi ukuphathwa nokutotoswa; yize kufanele sazi ukuthi ubekelwe abantu angabazi kancane, kepha akukho lutho ukuphathwa kwekati okungeke kulixazulule.
Inezinga lamandla aphakeme kakhulu, ngakho-ke kuyadingeka ukunikela isikhathi kuyo ukuze ukwazi ukuyishisa futhi wehlise umoya.
Ukunakekelwa kwekati lase-York Chocolate
Isithombe - Petsionary.com
Ukuba yisilwane esidla inyama kuzodingeka ukuthi unikeze okuphakelayo okunothile ngamaprotheni ezilwane angenakho okusanhlamvu, noma umnike ukudla okungokwemvelo okufana neYum Diet yamakati, iSumum noma okufanayo.
Nsuku zonke kufanele umbrush ngekhadi, futhi masonto onke hlanza amehlo nezindlebe nge-gauze ehlanzekile. Ungamgezi, ngoba akayidingi (ngaphandle kokuthi eyeka ukuzilungisa noma sebengcole ngokweqile, kunjalo).
Nsuku zonke kufanele udlale naye ukuze akwazi ukuzivocavoca futhi amvimbe ekwenzeni isimanga ekhaya. Ukuze wenze lokhu, ungathenga amathoyizi esitolo sezilwane, noma uzenzele ebhokisini lekhadibhodi noma entanjeni.
Isithombe - Wikipets.es
Yize kunguhlobo olujabulela impilo enhle, njalo uma usola ukuthi akaphilile kufanele umyise kudokotela wezilwane ukuze ahlolwe futhi anikezwe ukwelashwa okufanele. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi uye kuchwepheshe ukubeka i-microchip, i- ukugoma futhi yini i-castre uma ungafuni ukuyenza izale.
Ngokunjalo, kubalulekile ukuthi ususe indle enhlabathini, nokuthi uhlanze ithileyi layo kanye ngesonto noma ngenyanga. Lezi zinyathelo zizosiza ukuqinisekisa impilo ye-feline, kanye nokuthula kwengqondo.
Ibiza malini ikati le-York Chocolate?
Ngabe uzimisele ngokuphelele ukuthola i-York Chocolate cat puppy? Uma kunjalo, okokuqala Kubalulekile ukuthi, uma uhlala nabantu abaningi, ubabuze ukuthi nabo bayayifuna yini intanga endlini. Futhi ukuthi lapho isilwane siyiswa endlini lapho kungavumelani bonke abahlali bendawo efanayo, kulula ukuthi kube nezinkinga ... futhi leyo enoboya yiyona cishe njalo ephuma kabi kakhulu.
Ngakho-ke, kuphela lapho isinqumo sesenziwe phakathi kwabo bonke, kuzobe sekuyisikhathi sokuqala ukufuna izindawo zokuzalela zohlobo. Uma usuwutholile, kufanele wazi ukuthi awukho umdlwane ozohlukana nonina okungenani uze ube namasonto ayisishiyagalombili ubudala, ngoba lapho usemncane udinga ukuthi aphuze ubisi futhi, futhi, afunde nokuziphatha njengekati.
Ngokuqondene nentengo, kuzoba khona I-800 euro. Uma kwenzeka uzoyithenga esitolo sezilwane, izindleko kungenzeka ukuthi zibe phansi.
Izithombe Zekati Zase-York Chocolate
I-York Chocolate yinto enoboya okujabulisa ukuyibuka. Inokuthwala, ubukhosi, namehlo ... okungenakwenzeka ukukhohlwa. Ngakho-ke, ngezansi sikushiya nochungechunge lwezithombe zalolu hlobo olubabazekayo lekati:
Isithombe - Amagama angukhiye-suggestions.com
Isithombe - Izithombe-of-cats.org
Isithombe - Cat-list.blogspot.com.es
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati lase-York Chocolate, lowo onoboya ofuna ukuba yi-panther
Ungayibona kanjani i-flea bite?
Yini okufanele ikati elincane liyidle